Edemede Andy Hamblin na Martech Zone |
Edemede site na Andy Hamblin
Na Mọnde, Nọmba 1, 2016 Na Mọnde, Nọmba 1, 2016 Andy Hamblin
Industrylọ ọrụ mgbasa ozi nke Homelọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ. N'oge a nke dijitalụ tụkọtara, ijikọ na-eji ọkụ mgbe ha na "na ọ laa" na ọha oghere ka esetịpụ nnukwu uru. Billboards, ebe nchekwa bọs, akwụkwọ ịma ọkwa na mgbasa ozi na-abụcha akụkụ nke ndụ ndị ahịa kwa ụbọchị. Ha na-enye imirikiti ohere iji zie ozi banyere ndị na-ege ntị dị mkpa na-enweghị asọmpi maka nlebara anya n'etiti ọtụtụ puku mgbasa ozi ndị ọzọ. Ma ọ naghị adị mfe mgbe niile